Ahoana ny fiantraikan'ny teknolojia Deepfake amin'ny marketing? | Martech Zone
Ahoana ny fiantraikan'ny teknolojia Deepfake amin'ny marketing?
Alarobia, Desambra 30, 2020 Alarobia, Desambra 30, 2020 Douglas Karr
Raha mbola tsy nanandrana ianao dia angamba ny fampiharana finday nankafiziko indrindra tamin'ity taona ity reface. Ny rindranasa finday dia ahafahanao maka ny tavanao sy manolo ny endrik'iza na iza amin'ny sary na horonan-tsary hafa ao anatin'ny tobiny.
Fa maninona no antsoina hoe deepfake io?
Deepfake dia fitambaran'ireo teny ireo Deep Learning ary Fake. Ny deepfakes dia mampiasa ny fianarana milina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy hanodikodina na hiteraka atiny ho enti-maso sy misy feo mety hamitaka.
The reface Ny fampiharana finday dia tsotra ampiasaina ary ny valiny dia mety ho mahatsikaiky. Hizara ny sasany amin'ny valiko eto aho. Fanamarihana… Tsy dia mamitaka izy ireo fa mahamenatra, mampihoron-koditra ary mahatsikaiky fotsiny.
Lahatsoratra iray nozarain'ny Douglas Karr (@Dknewmedia)
Ampidino ny Reface App
Moa ve mahatsiravina kokoa ny Deepfakes noho ny mahatsikaiky?
Mampalahelo fa miaina ao anaty tontolo iray izay manjaka ny fampahalalana diso. Vokatr'izany, ny teknolojia deepfake dia iray izay mety tsy hampiasaina amin'ny zavatra tsy manan-tsiny toy ny fanaovana ahy mandihy na kintana amin'ny sarimihetsika… azo ampiasaina hanaparitahana disinformation ihany koa.
Alao sary an-tsaina, ohatra, ny sary, horonam-peo na horonan-tsary izay mampiasa teknolojia deepfake hananganana mpanao politika. Na dia fantatra ho deepfake aza izany, ny valiny dia mety handeha amin'ny hafainganam-pandehan'ny media sosialy hanodinkodina ny hevitry ny mpifidy. Ary indrisy, ampahan'ny isan-jaton'ny mpifidy - na dia kely aza - no mino izany.
Ity misy horonantsary tsara avy amin'ny CNBC momba ity lohahevitra ity:
Araka ny efa tsapanao, ny mpanara-maso sy ny teknolojia detection dia lasa malaza be hanandrana hiady amin'ny teknolojia deepfake. Tsy isalasalana fa hahaliana ilay izy…
Ahoana ny fomba fampiasana Deepfakes amin'ny marketing?
The teknolojia hiteraka haino aman-jery deepfake dia loharano misokatra ary misy manerana ny tranonkala. Na dia hitantsika amin'ny horonantsary maoderina aza izany (sary nalaina tamin'i Carrie Fisher tamin'ny taona 1970 dia nampiasaina tamin'ny deepfake tao amin'ny Rogue One), mbola tsy nahita azy ireo tamin'ny marketing izahay… fa hitantsika.
Ny fifampitokisana dia manakiana amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny mpanjifa sy ny marika. Ankoatry ny fanamafisana ara-dalàna, ny orinasa mitady ny fampiasana teknolojia deepfake amin'ny varotra sy ny ezak'izy ireo amin'ny marketing dia tsy maintsy hirosoana maivana… saingy mahita fotoana mety aho:
Haino aman-jery manokana - Ny marika dia mety hiteraka haino aman-jery ho an'ny tanjon'ny fampidirana ny mpanjifany fotsiny. Alao sary an-tsaina ny mpamorona lamaody, ohatra, ahafahan'ny olona mampiditra ny tarehiny sy ny vatany amin'ny horonan-tsary iray. Hitan'izy ireo ny fahitana ny lamaody amin'ny fomba fijery (mihetsika) fa tsy mila manandrana ilay akanjo mihitsy izy ireo.
Haino aman-jery misaraka - Mety ho lafo indrindra ny fandraisam-peo sy ny fanovana horonantsary ary ny marika dia manadinika bebe kokoa ny fanehoana ny demografika sy ny kolontsaina aseho. Ato ho ato, marika iray afaka handefa horonan-tsary iray - fa mampiasa teknolojia deepfake hampisaraka ny hafatra hanehoana demografika sy kolontsaina samihafa ao anatiny.
Hanome Video - Ny marika dia mety manana ny solontenan'ny mpivarotra na ny mpitarika azy ireo kintana amin'ny horonantsary izay lalina saingy natao manokana hifandraisana mivantana amin'ny prospect na client. Ity karazana haitao ity dia efa misy amina sehatra Synthesis. Na dia mino aza aho fa tokony hamoaka ny deepfake ireo marika, ity dia fomba mahasarika ny maso hiresaka mivantana amin'ny olona tsirairay manokana.
Haino aman-jery voadika - Ny marika dia afaka mampiasa influencer amin'ny fiteny. Ity misy ohatra mahafinaritra an'i David Beckham - izay hisintona ny sainy ny fitoviana aminy, fa ny hafatra kosa nadika araka ny tokony ho izy. Amin'ity tranga ity dia mampiasa feo hafa sy teknolojia deepfake ho an'ny fivezivezena amin'ny vava izy ireo… saingy azon'izy ireo natao ihany koa ny nampiasa deepfake hanoloana ny audio.
Amin'ireo ohatra rehetra ireo, ny deepfake dia tsy eo hamitahana fa hanatsara ny fifandraisana. Tsipika manify io… ary ny orinasa dia tokony hitandrina hanaraka azy!
Andao hamarana izany amin'ny fanamarihana tsara…
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy mpampifandray ahy amin'ny Rindrambaiko reface. Manoro hevitra mafy ny kinova aloa aho izay manome haino aman-jery fanampiny hanakorontanana.
Tags: Affiliatefianarana lalinadeepfaketeknolojia deepfakemanadio
AudioMob: Miantso amin'ny varotra amin'ny taona vaovao miaraka amin'ny Audio Ads
Fanontaniana 15 tokony hapetrakao momba ny API alohan'ny hisafidianana sehatra